सेयर बजार ओरालो लाग्यो, लगानीकर्ता बिच्किए ! | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
३१ भदौ, काठमाडौं । सेयर लगानीकर्ता अम्बिकाप्रसाद पौडेलले आइतबार सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘साँच्चै नयाँ-नयाँ किताबहरुको खोजी गरी एकान्तमा पढ्ने दिन आएकै हो त ? नेप्से १७.८७ ।’
सरकार बजारका विषयमा गम्भीर बने यस्तो अवस्था सिर्जना नहुने उनी बताउँछिन् । बसेयर बजार ओरालो लाग्यो, लगानीकर्ता बिच्किए !जार घट्नुमा सरकारी नीति पनि एउटा कारण भएको उनको तर्क छ ।
समाचारलगानीकर्ता बिच्किए !, सेयर बजार ओरालो लाग्यो